“Messi u baahna inuu ku guuleysto abaal marin, sababtoo ah wa kan ugu wanaagsan caalamka”… Suarez – Gool FM
“Messi u baahna inuu ku guuleysto abaal marin, sababtoo ah wa kan ugu wanaagsan caalamka”… Suarez
(Barcelona) 11 Sept 2018. Ciyaartoyda reer Uruguay iyo kooxda Barcelona ee Luis Suarez ayaa u arka in ka saarista Lionel Messi liiska saddexada xidig ee ku dagaalameysa abaal marinta laacibka ugu fiican aduunka ee FIFA inaysan waxba ahayn.
Xiddiga reer Argentine ayaa laga saaray liiska kama dambaysta ah ee FIFA, kadib markii ay isugu soo hareen xidigaha Cristiano Ronaldo, Luka Modric iyo Mohamed Salah.
“Uma maleynayo in abaal marin kasta uu Messi ku guuleysto ama uusan ku guuleysan ay hoos u dhigeyso, guulihii uu soo gaaray ama kuwa uu doonayo inuu gaaro”.
Si kastaba laacibka reer Uruguay ee Luis Suarez ayaa wuxuu sheegay in wax walba ee dhaca Lionel Messi uu yahay laacibka aduunka ugu fiican, isla markaana uusan u baahneen in abaal marin uu ku guuleysto , si uu u xaqiijiyo inuu yahay kan ugu wanaagsan aduunka.
"Waxaan rabay Chelsea laakiin waxay igu qasbeen inaan ku biiro Man City.". Robinho oo Daaha ka rogay SHEEKO YAAB LEH
Halyayga kooxda Manr United Eric Cantona oo soo xushay kooxdiisa ugu fiican taariikhda kubada cagta